Onye na-egwu egwuregwu Lionel Messi - ogo, ibu
Kpakpando Encyclopædia nke kpakpando
Uto na ihe ndi ozo nke football star - Lionel Messi
Ọbụna ndị na-agbanye obi ike nke ụlọ ịgba chaa chaa, "Barcelona" ọ bụ ezie na ọnụ ntị ya nụrụ banyere ọkpọ egwu ya - Lionel Messi. Nwa amaala nke Argentina enweela ike ịghọ onye a ma ama n'oge ọ bụ nwata na ihe mgbaru ọsọ ya, ma mee nnukwu ihe ọ rụzuru n'oge ndụ ya. Fans adịghị enye ezumike, ihe njirimara bụ Lionel Messi - ịrị elu nke onye a ma ama bụ nke nwere mmasị dị elu.
Onye na-egwu egwuregwu Lionel Messi
A mụrụ onye ahụ n'ọdịnihu na June 24, 1987 n'obodo Rosario nke mepere emepe, n'ógbè Santa Fe. Aha zuru oke dika Lionel Andreas. Dịka aha, o nwere aha aha abụọ - Leo na Bloch. A naghị ejikọta ụdị ọrụ nke nne ma ọ bụ nna na football, ọ bụ ezie na e nwere ihe ọmụma banyere njikọ ọbara dị anya na ndị na-eto eto na-eto eto bụ ndị a ma ama Boyan Krkic. A na-ahụ mkpụrụ ndụ yiri nke ahụ na Leo nwanne mama, bụ onye gosipụtara na nke ọma na ubi ahụ. Ndị nna ochie nke ezinụlọ biri n'otu oge n'obodo Ancona nke Ịtali, site n'ebe ahụ kwaga Argentina. Ọ bụrụ na i jiri nlezianya tụlee usoro ọmụmụ, ị ga-ahụ alaka ọzọ - si Catalonia.
Nna ya, Jorge Horacio, nwetara ndụ ya ma debe nnukwu ezinụlọ, na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ, ma ka na-ahụ oge maka football. Nne ya, bụ Celia Marie, na-elekọta ụmụaka, na-achọ oge na ọrụ maka nwanyị nhicha. Ha nwere ụmụ nwoke, Rodrigo na Matthias, na nwa nwanyị Maria Sol. Mmasị maka egwuregwu ọkpụkpọ egwuregwu na-aga n'ihu nke Barcelona Lionel Messi ketara n'aka nna ya, bụ onye kụziiri ụlọ ọrụ amateur "Grandoli". Ọ bụ n'ebe ahụ ka nwata ahụ malitere ịmalite nzọụkwụ mbụ ya na football. N'ụzọ dị ịtụnanya, eziokwu ahụ bụ na site na ezinụlọ dum nanị nne nne ochie chọrọ nwa nwa nke ọrụ dị otú a, ọ bụ ya mere o ji kata ọmụmụ ya. N'ịkele maka nke a, onye na-awakpo ahụ nyere ya ihe mgbaru ọsọ ya niile. Ka ọ na-erule afọ 1995, ọ na-egwuri egwu maka ụlọ ọrụ ọkachamara - "Newells Old Boyles", na n'oge a merie Cup of Friendship of Peru.
Lionel Messi - idi elu, ibu
Fans ndị dị egwu nke onye ahụ na-awakpo na-echegbu ọ bụghị nanị na egwuregwu ahụ n'ọhịa, kamakwa site na ihe ọmụma nkeonwe, dịka ọmụmaatụ, nke nwere uto na ole ọ dị arọ. Mgbe ọ dị afọ iri na otu, ndị dọkịta chọpụtara na ụkọ hormone na-eto eto, nke dị nanị 140 cm. Eziokwu a sitere na akụkọ ndụ nke kpakpando football bụ ndị nwere mmasị dị ukwuu, nke a bụkwa n'ihi nlebara anya Lionel Messi.
Klọb ndị nwere mmasị na onye na-eto eto nke nwere nkà nwere ike ghara inye ego dị otú ahụ. Naanị mgbe nwatakịrị ahụ hụrụ onye nduzi egwuregwu nke "Barcelona" Carles Reshak, na aka ọkụ nke onye na-ekere òkè na ndị na-agụ akwụkwọ abụọ, ọgwụgwọ dị oké ọnụ ahịa na ịnyefe onye mmeri n'ọdịnihu. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ikwu okwu n'òtù ndị ntorobịa. Lionel Messi - uto nke kpakpando, bu ihe ndi mmadu na-ele anya.
Lionel Messi - arọ
Eziokwu ahụ site na nwata biography nke football football banyere ụkọ nke homone na- emetụta asịrị banyere ibu. Ọ bụ ezie na ọrịa ahụ meriri ọrịa ahụ, ọ bụ Lionel Messi kachasị mma ọkpụkpọ egwuregwu na-akpọ "Kid". Ọnụ ọgụgụ nke onye mmeri ahụ dị kilogram 67, ma ọ nwere ike ịgbanwe, ya mere, a na-anabata ihe dị iche na ntinye / kg dị na ya, ebe isi na-enye ihe ọmụma na ihe dị ka kilogram 70.
Kedu ihe dị elu nke Lionel Messi?
Na oge nke mmụba na ama ama, oge niile enwere esemokwu. Ihe ndị dị iche iche adịghị abịa n'otu echiche ahụ, ụfọdụ na-azọrọ na ọ dị 169 cm, na ndị ọzọ - 170 cm. Ihe dị iche na centimita nke ihu igwe anaghị egbochi onye na-ebido ihe mgbaru ọsọ. Ndi oru mgbasa ozi choro data na mmuta Lionel Messi na 2016 bu 170 cm.
10 ndị na-eme egwuregwu si Forbes na-edekọ na nnukwu ego afọ
Lionel Messi gosipụtara nwa ya nke atọ na ndị fan
Lionel Messi ghọrọ nna nke ugboro atọ ma gosi nwa ọhụrụ ahụ
Ndị na-egere nwere ike ịkọwa ihe data bụ eziokwu.
Irina Sheik: ụzọ nke Cinderella sitere na Russia si n'azụ ụwa
Uto na ibu nke Eva Longoria
Uto nke Daniel Radcliffe
Uto nke Lionel Messi
Onu ogugu nke Merlin Monroe - ihe omuma nke nwanyi nke iri afo abuo
Uto na ibu nke Johnny Depp
Drew Barrymore n'oge ọ bụ nwata
Julianne Moore n'oge ọ bụ nwata
Uto nke Kylie Minogue
Ogo na ibu nke Victoria Beckham
Uto na ihe ndị ọzọ nke Jackie Chan
Ọganihu nke Leonardo DiCaprio
Uto na ihe ndị ọzọ nke Lucy Hale
Ogologo na ibu nke Wesley Snipes
9 ndị dị ndụ, bụ ndị na-erule afọ 60 ga-eme ka ị bụrụ nde mmadụ
Kedu ka esi eweghachi microflora intestinal mgbe ịṅụ ọgwụ nje?
Louis Vuitton - akụkọ ihe mere eme nke ụwa a ma ama na nke kachasị mma
Kedu otu esi eme ka akwara gị na uche gị dị ike?
Nhọrọ site na toki
Anwụrụ nke eyịm
Osisi n'ime ime
Ụmụ nwanyị oyi aji na-ekpuchi 2015-2016
Egbugbu maka Mgbu
Potato donuts - a na-atọ ụtọ na-emeso
Bella Hadid zutere Kendall Jenner na nwa-nwoke-ibe ya
Foto ndị dị na mkpụmkpụ
Jiri aka aka gị dee Scrapbooking notepad
Afọ ole ka Santa Claus dị?
Ịgba ogige n'ime ụlọ
Xu-Xu ngwongwo Strawberry
Ụdị mgbagwoju anya
Ụlọ ụlọ na-arụ ọrụ na kpochapụ
Ihe nkwụsị nke arọ
Akụkọ Chloe Love Story
Pancake: otu esi ahọrọ?
Oghere na bangs 2016